Posted by admin on August 06 2014 16:49:24
HS:-Maxaad ka taqaanaa taariikhda wasiirka Arimaha gudaha Cabdullaahi Godax Bare dhinaca siyaasada, qabiilka uu dhalasho ahaan ka soo jeedo asalkiisa iyo waliba sida uu u kala dilo golaha wasiirada xukumada R/wasaare Cabdiweli iyo xildhibaanada reer Hiiraan? Part One.
HS:-Wasiirka Arimaha gudaha dowlada federalka Soomaaliya Cabdullaahi Godax Bare waa muwaadin Soomaaliyeed dhalasho ahaana inta la xasuusto ka soo jeeda Hiiraan. waa aabe leh dhawr xaas iyo Caruur ku kala nool qaarada Africa iyo waqooyiga Ameerica siiba Canada, Musambiig iyo magaalada Mogdishu.
Cabdulaahi Godax waxuu siyaasada Soomaaliya ku soo biiray dhawr sano ka hor xiligaasi oo ay olole xoogan u galeen ganacsato ku nool dalka Kenya xiligii uu wadanka joogay madaxweyne Sheikh Shariif waxuuna noqday wasiirkii qorsheynta xukumadii Cabdiweli Gaas.
Qaabka ay siyaasadiisu ku shaqeyso iyo sida uu Soomaalida kula jirta siyaasada amaba dowlada hada jirta u kala dilo.
Golaha wasiirada ee xukumada R/wasaare Cabdiweli Sheikh waxaa ka dhex jira isfahmi waa intiisa badan uu sabab u yahay wasiirka arimaha gudaha marka ay golaha wasiiradu doonayaan iney ka hadlaan wax dalka iyo dadka Soomaaliyeed u dan ah badanaa waxuu ku guuleystaa amaba ka shaqeyaa sidii ay wasiiradu u kala fogaan lahaayeen dhaqanadaas ma ahan oo kaliya inuu ku hayo golaha wasiirada waxuu kala dilaa xildhibaanada reer Hiiraan.
Waa wasiir aad u af xun waxaana ku adag sidii loola dhaqmi lahaa Soomaalida kula jirta xukumada amaba golaha baarlamaanka.
Dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee aanu xasuusano waxaa ugu weynaa kedib markii wasiirada haweenka Marwo Khadiijo Mohamed Diiriye uu u geystay aflagaado isagoo meel uga dhacayo nasabkeeda iyo guud ahaan dadka ay ka soo jeedo, wallow ay waxgarad ka soo jeeda beesha Xawaadle oo rag iyo dumarba leh raaligelin buuxda ka siiyeen gefkaas oo ay gurigeeda ugu tageen aadna ay ugu faraxday waxgaradka waxeyna tiri aniga siwanaagsan ayaan idiin aqaanaa dad sharafta iyo wanaaga jecel in aad tahiin laakinse been idiinma sheegayo waligey ninkan oo kale ma arag ee ma hubtaan inuu idiinka dhashay ayaana hadalo kooban ee ay dadkii u tagay ku tiri ka mid ahaa.
Khadiijo Maxamed Diiriye iyada iyo qoyska ay ka soo jeedo Soomaali dhan wey ogtahay iney yahiin wadaniyiin dalka iyo dadka Soomaaliyeed jecel xornimada aanu maanta ku naaleyno waxaa wax ka dhaliyey awoowayaasheed Soomaali oo dhana wey ogtahay arintaas oo hada looma sheegayo.
Waxaa kale oo taasi ka sii daran markii uu wasiir Godax hadane aflagaado u geystay mid ka mid ah haweenka ka mid ah golaha wasiirada oo iyaduna ka soo jeedo Hiiraan laguna magacaabo Nadiifo Maxamed Cismaan oo reer Hiiraan ah oo ay waliba wasiir Godax isla ahaayeen reer Bulo Burde waxii uu yiri mediyaha in aanu ku soo qorno waanu ka xishoonay laakinse waxaa in ay Soomaali badan isweydiiyaan u baahan..
Dalka Soomaaliya waxaanu lahaan jirnay dhaqan aad ayeyna noogu weynaan jireen dumarka Soomaaliyeed side nin sidan dumarkii u aflagaadeeynayo xil iyo masuulid intaan la eg loogu dhiibay amaba loogu aaminay mise dalka dhan ayaaba loogu talo galay burbur?
Wasiirka arimaha gudaha mudadii uu joogay waxuu kala dilay xildhibaanada reer Hiiraan siyaasadahiisa guracan aawadeed ayaa isagoo aan la tashan waxuu madaxweynaha ku qasbay in dib maamulka Hiiraan loogu magacaabo C/fataax Xasan Afrax kediba xildhibaanada waxey dhamantood marka laga reebo 1 ama 2 ku biireen xildhibaanadii ka codsaday madaxweynaha Soomaaliya inuu iscasilo ilaa hadana arintaas miiska ayey u saran tahay.
Hadaan Xildhibaanada reer Hiiraan kala qaadno kuwa beesha Xawaadle oo u badan aqoonyahano wax badana ka duwan kuwii iyaga ka horeyey ma jirto wax xiriir ah oo kala dhaxeeyo wasiirka arimaha gudaha hadii aad reer Hiiraan tahay oo aadan horey u ogeyn hada ogaaw taasi bedelkeedana waxey isku xiran yahiin xildhibaanada kale ee reer Hiiraan.
Hadaan u soo laabano dhinaca dhalashada iyo qabiilka uu ka soo jeedo dhalasho ahaan wasiir Godax?
Cabdulaahi Godax aabahiis waxaa la yiraahdaa Godax Bare Fiidow. Odaygii Fiidow ahaa waxuu dhalay dhawr will waxaase la yiraahdaa Bare wuu soo koriyey isaga ma dhalin waxuu ka soo jeedaa qabiilka Abgalka sidaas waa wararka duul duulka ah laakinse ( arintaan waxey u baahan tahay hubin badan waxaanu la gaashan doonaa jiritaankeeda waxgaradka beesha Xawaadle ee taariikhda beesha si fican u yaqaana arintaasne waanu bilaawnay natiijada iyo odoyaal noo balansan oo kor u dhaafaya 10 laakinse waxaa la rumeysan yahay in Guure Fiidow iyo Xaanshi Fiidow inuu isaga dhalay.
Arintaan dhalashada wasiirka dib u eegdi loogu sameynayo ayaa timid kedib markii uu bilaabay amaba kala shaqeeynayo sidii Hiiraan loogu hibeyn lahaa beesha Abgaal oo hada ciidamo soo dhaabtay xadka Hiiraan iyo Sh/dhexe oo kaliya doonayaan in mar uun la yiraahdo Hiiraan iyo Jowhar ayaa leysku daray.
Isku soo duuboo marka aad la sheegeysato odoyaal ka soo jeeda beesha Abgaalne waxey kuu sheegayaan in Ganacsade Abuukar Cumar Cadaan oo ka soo jeeda beesha Abgaal jufada Warsangeli Abgaal inuu asalkiisu yahay Xawaadle. sikasta oo ay ahaataba reer Muduga waxey dhahaan warjiraaba cagaaruu imaan , hadii ay beesha Abgaal isku heystaan wasiirkii arimaha gudaha iyo xilkii madaxweynaha Soomaaliya sidaasina ku doonayaan in beesha Abgaal loogu xalaaleeyo Hiiraan wax badan ayaa arintaas ka horeeya dhimasho iyo taariikhda wasiirka arimaha gudaha oo dib loogu laabto wadadeediina weynu haynaa aanu ku ogaan laheyn jiritaanka arintaas.
La soco odoyaasha aanu taariikhda wasiirka arimaha gudaha ka wareysan doono oo u badan dad isaga dhalasho ahaan xiga kana soojeeda beesha Agoon Cabdalle iyo Odoyaal kale oo ka soo jeeda jufooyinka kale ee ay beeshu ka kooban tahay.
Waxaan shaki ku jirin in aysan qoraalkaan ka xanaaqi doonin wasiirka arimaha gudaha iyo ehelkiisa waayo hadii adigoo lagu yiraahdo Cabdullaahi amaba Ahmed lagu yiraah magacaas ma tihid waxaa kugu filan oo kaliya inaad tiraahdo ma ahi ee Aabahey iyo hooyadey midkaan ayey iila baxeen dhalashada aanu ka hadleyno ee wasiirka arimaha gudahen waa sidaas oo kale.
Wararkii ugu danbeeyey ee aanu ka heleyno Mogdishuna waxey sheegayaan in ay halkaas olole ka wadaan xildhibaanada reer Hiiraan oo u muuqda kuwo dhiig isku yeelay si ay meesha uga saaraan wasiir Godax, dhianca Hiiraane waxaa lagu soo waramayaa in dhawaan halkaas looga yeeridoono hadii uu imaan waayane laga tashan doono.
La soco wararkeena danbe iyo wasiirka arimaha gudaha Xawaadlaha munaafiqiinta ah wax badan ayey ku xantaan laakinse kuwooda daacada ah waxey bilaabeen iney isweydiiyaan inuu beeshaan ka dhashay iyo kan kale.